Abayili beFashoni abatyebileyo baseNew York - Ezopolitiko
Eyona Ezopolitiko Abayili beFashoni abatyebileyo baseNew York
UMichael Kors umboniso wefashoni. (Ifoto nge-Getty)
Imfazwe engapheliyo inxenye 2 ithiyori
UKUYANgokuya kwi-Bureau of Labor Statistics, umndilili waseMelika uchitha i-1,700 yeedola ngonyaka kwizambatho, esona sixa sikhulu sizii-562 zeedola kubafazi abangaphezulu kweminyaka eli-16. Kubahlali bePark Avenue elo nani liqhezu nje leendleko zempompo enye. Ngokuqinisekileyo sisiqwengana esithobekileyo se- $ 2 yezigidi zezigidi-ngonyaka zorhwebo lweengubo ezisebenzisa malunga nezigidi ezingama-75 zabantu, ngokweFashoni United. KwisiXeko saseNew York kuphela, abona batyebisi befashoni batsalela i-24 yezigidigidi zeedola kubutyebi obudibeneyo, ngokutshoukuya osaziwayo.bg . Kodwa kwii-fashionistas eziyinyani ezizinto ezininzi ezithandwayo kwaye zifunwa emva kweengxowa. Umyili uRalph Lauren umi kwindawo yokubaleka. (Ifoto ngu-JP Yim / Getty Izithombe ze-NYFW: Imiboniso)
URalph Lauren,Ukubaluleka kwe-Net: $ 8.2 yezigidigidi
Ngaba uStefan Larsson, owayengumongameli wehlabathi we-OId Navy, angaphefumla ubomi obutsha kuRalph Lauren Corp? Ngokuqinisekileyo le njongo yenkampani yokuqesha umgqatswa ongathandekiyo ukuba athabathe indawo yomsunguli wayo oneminyaka engama-76, osandula ukubuya umva kwinkampani. Umnumzana uLauren akathathi umhlala phantsi ncam; usazakuhlala engusihlalo olawulayo kunye negosa eliyintloko lokuyila kwinkampani ayisekayo kwiminyaka engama-48 eyadlulayo. Nokuba uMnu Larsson, isigqeba solawulo esaziwa ngakumbi nge-acumen yakhe yokuthengisa kuneendlela zakhe zoyilo, iya kuba ngumdlalo olungileyo wokucoca indawo ephezulu njengoLauren uhlala ebonwa, kwaye ukubuya kwangoko kuxubiwe. Emva kokubhengezwa kokuqeshwa kukaMnu. Larsson, amasheya adubula phambi kokulinganisa kancinci.
UValentino Garavani,Ukubaluleka kwe-Net: $ 1.5 yezigidigidi
Nangona sele kuyiminyaka esibhozo okoko umyili oqaqadekileyo wase-Italiya-owaziwa ngokuphila ubomi obugqithisileyo-wayishiya inkampani awayisekayo kwiminyaka engama-55 eyadlulayo, umbono wakhe we-upscale haute couture uyaphila. Ngoku i-brand ayenzileyo inokudlala ngemithetho yabanini bayo abatsha baseQatar njengenxalenye yejuggernaut yefashoni yamanye amazwe; Vogue UK kunye neBloomberg baxele ukuba uMayhoola woTyalo-mali, othenge ilebheli ngo-2012, unokufuna i-IPO. UMyili uDiane von Furstenberg (Ifoto ngu-Peter Michael Dills / imifanekiso kaFetty).
UDiane von Furstenberg,Ukubaluleka kwe-Net: $ 1.2 yezigidigidi
Akukho nzame yomntu, kubonakala ngathi, ayinakuguqulwa ibe ngumboniso oqinisekileyo. Ubungqina, bamba nje isiqendu se Indlu yeDVF kwi-E! inethiwekhi. I-doyenne enkulu yengubo yokugoba iye yangena kumzi-mveliso apho inyani ibonisa ukuba abo bakhuphisana nabo bafuna udumo, ubutyebi, kwaye okona kubaluleke kakhulu, amanqaku. Kodwa uNks Furstenberg ungaphezulu kakhulu komntu okwi-screen; uzinzile nakwindawo ephambili yomzi mveliso ngendima yakhe njengosihlalo webhodi kwiBhunga laBayili beFashoni baseMelika.
UMichael Kors,Ukubaluleka kwe-Net: $ 1 yezigidigidi
Ukongeza kwintetho yakhe elungileyo kwimihla (uKate Hudson, uKarlie Kloss), uMnu. Kors ukwangumntu ozinikeleyo; Uthando lukaThixo Sihlangula, engenzi nzuzo ehambisa ukutya kubathengi abasekhaya, ithiye ikomkhulu labo elitsha emva komyili. UMyili weTory Burch (Ifoto ngu-Andrew Toth / Getty Izithombe)
Umxholo weBurch,Ukubaluleka kwe-Net: $ 1 yezigidigidi
Isithili seFlatiron siqinisekisiwe njengeziko lendalo yonke yaseTory Burch, kunye nomyili wodumo ovula indawo esisigxina kumgca wakhe omtsha weTory Sport wempahla yezemidlalo. Ilebheli ye-offshoot ibonelela ngokukhetha iimpahla zetenisi, imisonto yeyoga kunye neelegging ezisisiseko, ecaleni kwesambatho esenzelwe ukuthoba umzimba emva kokuzilolonga. Oku kulandela kwizithunzi zevenkile ekuthiwa yiSoho kuluhlu. U-Burch ozichazayo okhulayo, U-Ms Burch ubelilungu elithandekayo kolu shishino ukusukela oko wahlasela umhlaba wefashoni kwiminyaka elishumi eyadlulayo, eshiya ngasemva umsebenzi wakhe wobudlelwane noluntu ukuzama isandla sakhe ekuyileni.
UCalvin Klein,Ukubaluleka kwe-Net: $ 700 yezigidi
Injani impumelelo inuka? KuCalvin Klein, impendulo ingafunyanwa nge-CK2, ivumba elijolise kumawaka-waka eliqala kwakhona umyili we-CK One, owasungula ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini eyadlulayo. Cwangcisa ukubetha kwimarike kunyaka olandelayo, i-iteration entsha ichazwe, yiFragrantica, njengevumba elitsha elisemadolophini. Umnumzana Klein, owashiya imisebenzi yakhe yoyilo xa uPhillips-Van Heusen ethenga igama lakhe ngo-2003, usengathembela kupapasho lwazo zonke iintlobo (kubandakanya amalungu ambalwa osapho lakwaKardashian) ezibuza ngezidanga ezahlukeneyo zokukhulula kodwa utyikityo lwebhanti luyatshona.
UDonna Karan,Ukubaluleka kwe-Net: $ 450 yezigidi
Nawuphi na umbuzo onokuthi ube nawo malunga nomyili we-Long Island owazalelwa igama lakhe langaphambili (kunye nelebheli yakhe encinci DKNY) inokufumaneka kwi Uhambo lwam , usandula ukukhupha imemo ekwabelana ngeenkcukacha zakhe zobuntwana obulilolo, iminyaka engamashumi amane nangaphezulu kushishino lwefashoni, imitshato yakhe emibini, ukuba ngumama, kunye nokuqhubeka kwakhe nokufuna ukuzamkela kunye noxolo lokomoya. Incwadi ifika ishushu kwizithende zikaNks. Karan wehla kwilebheli yakhe engaziwayo ngoJuni ukugxila kwixesha lakhe kwi-Urban Zen, uphawu lwendlela yokuphila enikezela iimpahla ezinxibe kakuhle ezijolise ekwenzeni ukuba abantu basetyhini bazive belungile ecaleni kwezinto ezivela kumagcisa avela kwikona nganye ye Ihlabathi. UMyili uVera Wang (Ifoto ngu-Andrew Toth / imifanekiso ka-Getty kwiDom Perignon -uDonga)
UVera Wang, uNet Worth: $ 400 yezigidi
Sukujonga uninzi lweRiphabhlikhi-okanye iiSocialists, malunga naloo nto-ukuba ubotshwe eVera Wang kokuwa. Umyili ubambisene kutshanje, kunye Vogue u-Anna Wintour, u-A-list fundraiser we-Democratic Presidentialist u-Hillary Clinton kwindlu yakhe ephezulu ye-Upper East Side. Ngaphandle kokuzibandakanya kweqela, abasetyhini abazimisele ukuzisongela kwenye yeengubo zomtshato zokuqokelelwa kukaNks.Wang baya kufuna ukwamkela ubutshanje. Uluhlu lwakutshanje lomtshato lwalukude nokuthotywa isidima, endaweni yoko kwakukho iiruffles ezimnandi, ukusikwa kwebarriff phakathi, ukuveza ithanga lehemlines kunye neentsimbi zokuntywila.
Ukuqhawuka kweNkwenkwezi uWillie Geist unokuba nguMat Lauer olandelayo
Ndlelantle kwii-Inept Character ze- 'Veep,' ezibekwe apha kwi-Order of Incompetence
Umthengisi othengisa kancinci ongena kuLonwabo
Mamela kuJimi Hendrix Ukudlala enye yeeKonsathi zakhe eziBalaseleyo
inkosana uGeorge eya esikolweni
ulinganise ii-movie zabantwana
ukukhangela kwefowuni yokwenyani yasimahla
olona ncedo lokunciphisa ukutya
Eyona ndlela yokufumana iinombolo zefowuni